Amathiphu eChina wokuklanywa kwezingxenye zepulasitiki eziqondile nokuklanywa komkhiqizi kanye nomphakeli | I-Mestech
Precision izingxenye plastic design futhi umjovo udini kufanele iqale ezintweni zokwakha, ukwakheka kwezingxenye zezakhiwo, ukuklanywa kwesikhunta nokucubungula, umshini wokubumba umjovo, ukusebenza ngobungcweti nemvelo enhle yokukhiqiza.
Ngokuthuthukiswa komkhakha wesimanje, kunezinto zepulasitiki ezanda kakhulu. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo yepulasitiki nayo isetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene. Ikakhulukazi, izingxenye zepulasitiki eziya ngokuya zisetshenziswa. Manje ake sabelane nawe ngamathiphu wokuklanywa kwezingxenye zepulasitiki eziqondile nokubumba.
Izingxenye zokunemba ngakubuso obuphakeme, njenge: motor gear, worm gear, screws, bearings. Lezi zingxenye ezinembile zivame ukusetshenziselwa imishini yokudlulisa eqondile (njengamaphrinta, amakhamera, ama-vacuum cleaner, ama-robots, imishini ehlakaniphile, ama-UAV amancane, njll.). Kudinga ukudidiyela okunembile, ukunyakaza okubushelelezi, ukuqina nokungabi nomsindo.
Imvamisa, udonga lwezingxenye zepulasitiki lungaphansi kuka-1.00mm, okungokwengxenye enezindonga ezincanyana. Izingxenye ezibiyelwe ngodonga zingenza ubukhulu bomkhiqizo bube buncane kakhulu. Kepha izingxenye zepulasitiki ezinodonga oluncane azikwazi ukugcwaliswa ngenxa yokupholisa nokuqina okusheshayo. Futhi izingxenye ezincanyana ezibiyelwe azikwazi ukumelana namandla of die and break in the die die. Ngakho-ke, ukwakheka kwezingxenye ezinobonda obuncane kufanele kukhethe izinto ezinezakhiwo ezingcono zomshini. Futhi ukwakheka okunengqondo, njengokulingana kodonga okufanayo, izingxenye azikwazi ukuba nodonga kakhulu. Ukufa okujulile, i-engeli enkulu. Kwezinye izingxenye ze-ultra-thin, umshini wokubumba umjovo wesivinini esikhulu uyadingeka.
Izingxenye ze-Optical zidinga ukusebenza okuhle kokuhambisa / ukukhanya, nokusimama okuhle kobukhulu nokuqina kokugqoka. Isibonelo, ukugobeka kobuso bamalensi we-concave ne-convex asetshenziswa kumaphrojektha kudinga ukunemba okuphezulu nokuqina. Kudingeka ipulasitiki ebonakalayo esobala efana ne-PMMA. Ngasikhathi sinye, ezinye izingxenye zokukhanya ezikhanyayo nazo zidinga ukwenza eminye imigqa emihle ebusweni bezingxenye ukwamukela ukukhanya noma ukukhanya noma ukuqeda ukukhanya.
D. Ingcwecwe ephezulu:
Izingxenye ezicwebezelayo kakhulu zifaka izingxenye ezibonakalayo, kanye nezinye izingxenye ezidinga ukuphela okuphezulu komhlaba (isibuko ebusweni). Lolu hlobo lwezingxenye lusetshenziswa kabanzi kwimikhiqizo yabathengi ye-elekthronikhi, njengamagobolondo omakhalekhukhwini. Idizayini yalolu hlobo lwemikhiqizo kufanele icabangele izinto zepulasitiki ezinomkhuhlane omuhle, ukwakheka kobukhulu kanye nobuchwepheshe bokufa.
Imikhiqizo eminingi ye-elekthronikhi nekagesi idinga ubufakazi bamanzi, njengezibuko / amawashi angenawo amanzi / i-elekthronikhi yamasosha, imikhiqizo yangaphandle nezinsimbi ezinemvelo yamanzi manzi. Izindlela eziyinhloko zokuvimbela ukungena kwamanzi yizimpawu ezibethelwe ebusweni bangaphandle bomkhiqizo, njengezikhiye ezifakiwe, ama-jacks afakiwe, ukuvalwa kwemigodi, i-welding ye-ultrasonic, njll.
Le nqubo ukubeka ifilimu ye-PET emgodini wokujova umjovo nokuhlanganisa izingxenye zomjovo kubuchwepheshe bokucubungula bonke, obuzonamathela ngokuqinile ezingxenyeni zepulasitiki. Izici zemikhiqizo ye-IMD / IML: ukucaca okuphezulu, stereoscopic, akukaze kuphele; ukucaca kwamalensi wewindi afinyelela ku-92%; ingubo emelana nokugqokwa nemithi yempilo ende yokusebenza; Ukuqina kwemikhiqizo eyisihluthulelo ngesikhathi sokubumba umjovo, impilo esemqoka ingafinyelela ngaphezu kwezigidi eziyi-1.
Ingxenye yodonga lweplastikhi elincane
Iphaneli yepulasitiki ye-IMD / IML
Izingxenye zepulasitiki eziqondile
Ingxenye ebonakalayo / ikhava esobala
Ikesi elingenamanzi kabili
Ikesi eliqondile lemikhiqizo kagesi
Izindlu ezihlala njalo zesakhiwo esiyinkimbinkimbi
A. ubukhulu bensimbi obufanayo Ekubunjweni komjovo, ipulasitiki isesimweni soketshezi isikhathi esifushane kakhulu, futhi ukufana kobukhulu bodonga lwezingxenye kunethonya elikhulu ekuhambeni kwe-velocity nasekuqondisweni kwepulasitiki. Ubukhulu bezingxenye buguquka kakhulu, obuzoletha uchungechunge lokukhubazeka kwekhwalithi njengokugcwalisa ukunganeliseki, ukusonteka, ukuncipha, amamaki we-weld, amamaki wokucindezela aqatha futhi acekeke, njll. Ngakho-ke, ubukhulu bodonga bezingxenye zepulasitiki eziqondile kufanele bube njengokufana kungenzeka ekwakhiweni. Ushintsho lokujiya akufanele lube lukhulu kakhulu, futhi ukwehla komthambeka noma i-arc kufanele kwenziwe kunguquko.
B. naka ukuhlangana phakathi kwezingxenye bese wenza izidingo ezifanele zosayizi ofanele. Ukuqinisekisa ukushintshana phakathi kwezingxenye, imvamisa sinikeza izidingo eziqinile zokunemba kwezingxenye ezithile. Kepha ezingxenyeni zepulasitiki, inezimo ezithile eziguquguqukayo nokuqina. Kwesinye isikhathi, inqobo nje uma ukwakheka kwesakhiwo kunengqondo, ukuphambuka kungalungiswa ngokusebenzisana phakathi kwezingxenye, ngakho-ke izinga lokunemba lingakhululeka ngokufanele ukunciphisa ubunzima bokukhiqiza. Isiqu.
C. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo Kunezinhlobo eziningi zezinto zepulasitiki, futhi ukusebenza kwazo kuyehluka kakhulu. Ezingxenyeni zepulasitiki eziqondile, izinto ezinokuncipha okuncane / ukusonteka / ukuqina okuhle kobukhulu / ukumelana nesimo sezulu okuhle kukhethiwe ngokuya ngezidingo zokusetshenziswa. (a) ABS / PC ene-shrinkage ephansi isetshenziselwa ukumiselela i-PP ngokuncipha okuphezulu, ne-PVC / HDPE / LDPE nge-shrinkage ephansi. I-ABS + GF isetshenziselwa ukufaka esikhundleni se-ABS.PC + GF nge-PC. (b) Khetha i-PA66 + GF noma i-PA6 + GF esikhundleni se-POM noma i-PA66 ne-PA6.
E. Unendawo yokwenza ngcono. Ekuklanyweni kwezingxenye zepulasitiki eziqondile, kubalulekile ukuhlola ukuphambuka okungenzeka ekukhiqizeni okuzayo.
Izindleko zokukhiqizwa kwe-A.CNC prototype ngokuvamile ziphakeme kunokuphrinta kwe-3D. Ezingxenyeni ezinkulu, izindleko zokucubungula i-CNC ziphansi kakhulu.
Okwezinto zokwakha nezakhiwo zemishini noma ukwelashwa kwendawo kanye nezidingo zomhlangano, kunconywa ukucutshungulwa kwe-CNC, ukuze kutholakale amandla amahle. Ezingxenyeni zosayizi omncane namandla aphansi, kusetshenziswa ukuphrinta kwe-3-D. Ukuphrinta kwe-3-D kuyashesha, futhi kushibhile kakhulu ezingxenyeni zosayizi omncane.
B. Ama-prototypes angaqinisekisa ukufaniswa komhlangano phakathi kwezingxenye, ahlole amaphutha wokuklama nokushiywa, futhi enze lula ukuthuthukiswa komklamo. Kodwa-ke, uhlobo oluthile alukwazi ukubonisa izidingo zobuchwepheshe besikhunta esakha, njenge-molding draft angle / shrinkage / deformation / fusion line nokunye
(1) ukwenziwa kwesikhunta sepulasitiki (ukwakheka kwesikhunta) Isikhunta sekhwalithi ephezulu siyisihluthulelo sokwenza izingxenye eziqondile. Amaphuzu alandelayo adinga ukulandela.
E. imishini yokuhlola edingekayo. Ngaphezu kwalokho, ukucutshungulwa kwesikhunta kufanele kulandele inqubo eqinile futhi kuncike kubasebenzi abasezingeni eliphakeme ukuze basebenze.
Langaphambilini Hot umgijimi isikhunta
Olandelayo: Ukuqothuka kwepulasitiki